हरेक हप्ता १०० पासपोर्ट बन्ने अर्घाखाँचीमा के सबै पेलेन चढछन होला! - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider जिल्ला समाचार हरेक हप्ता १०० पासपोर्ट बन्ने अर्घाखाँचीमा के सबै पेलेन चढछन होला!
हरेक हप्ता १०० पासपोर्ट बन्ने अर्घाखाँचीमा के सबै पेलेन चढछन होला!
राजु खडका, यु ए ई
बिदेशी रेमिटेन्सले धानेको देश मध्ये एक देश हाम्रो नेपाल पनि हो। २,३ बर्ष पहिला बिदेश जानेको सन्ख्या दैनिक १७ सय थियो भने अहिले आएर १५ सय जती भएको छ। घटदो छ भन्ने खोजेको राम्रो नै हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। देसको राजनीतिक अस्थिरता, दक्ष नागरिकको लागि उपयुक्त रोजगारी र लगानी कर्ताको लागि सुरक्षा नहुनु आदी मुख्य कारण बनेका छन। दिनानु दिन सबै कुरा सामाजिक सन्जालमा अबगत भएकै छ। कस्ले कहाँ के गर्‍यो देखी लिएर नेपाल को राजनीतिमा नेताहरु को खेल र देश बिदेशमा युवाहरु को स्थिती अहिले फेसबुक, ट्युटरमा छरपस्ट देख्न सकिन्छ।
पछील्लो केही समय यता जिल्ला प्रशासन अर्घाखाँचीले आफुले गरेका दैनिक गतिबिधीहरु लाई फेसबुक मार्फत जानकारी गराउदै आएको छ। हुनत फेसबुक को शुरुवात धेरै पहिला बाट भएको हो तैपनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची ले जुलाई २२ तारिक २०१६ बाट मात्र शुरु गरेको छ। शुरु गरे पछी प्रशासनले आफ्नो दैनिक गतिबिधीलाई प्रकाशन गर्ने गर्थ्यो म यु ए ई मा भए पनि जिल्लामा हुने गतिबिधीलाई नजिकै बाट हेर्न मन लाग्छ र चासो पनि दिन्छु। आफु खाडीमा भएको हुनाले होला मेरो ध्यान सधैं १,२ नम्बर अनुसार नगएर सिधै १० र ११ मा पुग्ने गर्थियो जहाँ राहदानी के कती बने भन्ने कुरा स्पस्ट लेखिएको छ।
एसो खाली समय मिलाएर एक हप्ता भरिका जोडेर बस्छु अनी अर्को हप्ताको तयारी गर्छु त्यसै गर्दा सरदर एकहप्तामा ९० देखी १०० सम्म राहदानी को लागि सिफारिस गरिदो रहेछ। मनमा कस्तो कस्तो लाग्यो एस्को मतलब कसैले गाई चराउन को लागि त अबश्य राहदानी बनाउदैन भने पछी हामी नेपालमा भन्दा पनि बिदेस जाने मा बढी जोड दिएको जस्तो महसुस गरे। के सबै जहाज चढने रहर गरेकै हुन त भनेर पनि सोचेको थिए मैले तर हो नै बाहेक कुनै प्रतिकृया यो मनमा आएन। परदेश पसेकाहरुलाई आफ्नो गाउ ठाउँ मै बस्न मन लाग्छ भने गाउ ठाउँमा बसेका हरुको लागि परदेश नै उत्तम लाग्दोरहेछ यो सोचाई भन्दा पनि बुझाईको कमी हो जस्तो लागेको छ।
एसरी हरेक हप्ता श्रमको लागि पनि जिल्ला बाट काठमान्डु सम्म १०० जना पक्कै जान्छन होला एक जनाको आवत जावत २ दिन को बसाई सम्म जोडने हो भने ४००० हजार खर्च हुदोरहेछ भने पछी हप्तामा ४ लाख रुपैया केबल छाप लगाउन को लागि मात्र अलग हुने खर्च रहेछ। एदी नेपाल सरकारले श्रम पनि जिल्ला प्रशासन बाट नै हुने ब्यबस्था गर्‍यो भने हरेक हप्ता अर्घाखाँची जिल्ला बाट ४ लाख रुपैया बच्दो रहेछ जुन केबल परदेश जाने हरुको लागि ब्याज सहित को रिण हो। हामी जिल्ला बाशी सबै को चाहना एही हो भने संयुक्त अनुरोध गरौ अबश्य केही हुनेछ भन्ने यो बिचार लेखेको छु अबश्य प्रतिकृया दिनुहोला।
जानकारी होश सरदरमा पुरानो जनगणना अनुसार DHO को जानकारी अनुसार अर्घाखाँचीमा दैनिक २४ बालबच्चा जन्मिने गर्दछन। जस्को हिसाब हप्ता मा लगाउने हो भने १६८ जना हुने गर्छन जसमध्ये १०० जनाको राहदानी बन्ने काम हर हप्ता हुने गर्छ।